Daawo Sawiro…Kooxda Milend oo Hanatay Koobkii Ramadaanta ee ka dhacay Bariga London | Salaan Media
Sidii aynu lawada soconay waxa ciyaaro kubada cagta ahi ka socdeen garoonka Stepney green ee bariga magaalada London , ciyaarahan oo socday intii bisha ramadaan ayaa waxa ku loolamay Laba iyo Toban kooxood oo kamida naadiyada kooxaha soomalilada ee ka jira magalada London.
Ciyaarahan ayaa waxa soo agaasimay oo ka hawl galay qabsoo midooda iskana xilsaaray jaaliyada east London Somaliland society, gaar ahaan garabka sportska.
Ciyaartan kama danbaysta oo ay ku hirdamayeen labada kooxood ee milend iyo stepney ayaa waxa ay ku soo gabagabooyday 2 iyo 1, halkaasina waxa guushii kala hoyday kooxda Milend iyadu hanatay koobkii ramadaanta .
Garoonka stepney green ayaa mid aad ay usoo camireen dadweynaha dagan degmada Towerhamlets, oo iyagu dhiiri galinayay dhalinyarada ciyaartooyga ah ee isugu soo hadhay ciyaarta kama danbaysta ee koobka ramadaanta.
Guud ahaan dadweynaha east London ayaa siweyn usoo dhaweeyay ciyaaraha ka socda Stepney green iyaga qaar koodna ay soo jeedinayeen in aanay ciyaaruhu ku koobnaan ramaadanta oo kaliya balse le helo xilyo kale oo sanad kii laba ama sadex jeer wareeg noociisa oo kale ah.
Dhanka kalena community-ga ugu balaadhan Towerhamlet ayaa Afur iyo casho ku qaabilay labadii kooxood eek u tartamay ciyaarta kama danbaysta ah, ee koobka ramadaanta.
Si kastaba ha ahaatee intii ay ciyaaruhu soc deen ayaanay wax caqabada la kulmin iyaga oo si habsami ah ay duwaanayeen dadweynaha sida wayn ula socday ciyaaraha koobka ramdaanta.
Daawo Sawiro Dheeraada (More Pictures)